के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ भने यस्ता छन् घरायसी औषधी « गोर्खाली खबर डटकम
के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ भने यस्ता छन् घरायसी औषधी
घाँटी दुख्ने साधारण समस्याबाट सुरु भएर अन्त्यमा मुटुको भल्भलाई क्षति पुर्‍याई यो रोगले मुटुलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउँछ र रोगीको मुटु फेल हुन्छ । यसैले विशेषज्ञहरू टन्सिलको समस्या भए चिकित्सकीय सल्लाह आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि वर्षभरि नै टन्सिलाइटिसको समस्या हुने गर्छ तथापि हाम्रो मुलुकमा जाडो सुरु हुनलाग्दा यो समस्या बढी मात्रामा हुने गर्छ ।
टन्सिलले अबका चार महिना बढी दु:ख दिने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ कान, नाक, घाँटी विशेषज्ञ डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव भन्छन्, ‘वयस्कलाई यो समस्या देखिए पनि मुख्यत: ३ देखि ८ वर्षका बालबालिकालाई यसले बढी सताउने गर्छ । ’हाम्रो मुलुकमा टन्सिलको समस्याबारे कुनै विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।
अमेरिकन एकेडेमी अफ ओटोल्यारिङ्गोलजी हेड एन्ड नेक सर्जरीका अनुसार, अमेरिकाका करिब सबै बालबालिका कम्तीमा एक पटक टन्सिलको समस्याले आक्रान्त हुने गर्छन् । चिकित्सा र शल्यक्रियाको क्षेत्रमा उपचारको प्रगतिले गर्दा हाल टन्सिलबाट उत्पन्न जटिलताका कारण मृत्यु हुने घटना बन्दप्राय: भएको छ ।